नयाँ वर्ष २०७८ रङ्गको वर्ष - खोजपत्र
वि.सं. २०७७ सालको पहिलो दिन नेपालहरुले हर्षोल्लासका साथ मनाउन पाएनन् । गएको वर्ष कोरोना महामारीको कहरले हरेक नेपालीहरु घरभित्र स्वबन्दी जीवन विताइरहेका थिए । ठिक त्यसको एक वर्ष पछि वि.सं. २०७८ साल बैशाख १ गतेको दिन नेपालका विभिन्न ठाउँमा मानिसहरुले भ्रमण गर्ने, परिकार बनाएर भोज गर्ने लगायत कृयाकलाप गरी हर्षोल्लास सहित मनाए ।
तर केही कलाकारहरुले पनि नयाँ वर्षलाई क्यानभासमा रङहरु भरेर जसरी नयाँ वर्षको सुरुवात भयो, त्यसरी अवका दिनमा आशा, भरोसाका प्रविम्बहरु कोर्दै मनाए । यसै क्रममा वैशाख १ गते आर्ट क्लब नेपालको आयोजनामा नेपाल कला परिषद् बबरमहलमा छुट्टै परिवेशको सिर्जना भएको थियो । कलाकाहरु आफ्नै शैलीमा चित्र बनाउँन तल्लिन थिए । कार्यशालमा वरिष्ठ कलाकारहरु विरेन्द्र प्रताप क्यानभासमा मठ मन्दिरलाई चराले च्यापेर कतै उडाउँदै पो छ कि भन्ने भाव देखिने आफ्नै मौलिक शैलीका रेखाचित्र कोर्दै थिए ।
अर्का वरिष्ठ कलाकार बाबुराजा देउला हराउँदै गरेको माटोका गाग्रीमा पानी बोक्दै गरेको युवतीलाई आफ्नो क्यानभासमा रङ पोत्दै थिए, उनको कलामा रंगको संयोजन हेर्न लायकका थिए ।
परम्परागत चित्रकलामा सिद्धहस्त पौभा चित्रकारका हिसावले परिचित वरिष्ठ कलाकार लोक चित्रकार चिलो रङ्ग माथि परम्परागत विषयवस्तुलाई सुष्म तरिकाले अभिव्यक्त गर्दै थिए । अर्का कलाकार अशुराम खाईजुले चित्रमा मुस्ताङ जिल्लाको परिवशेलाई आफ्नो क्यानभासमा उतारिरहेका थिए । पग्लिएका हिउँ र उडेका हुस्सुलाई उनले क्यानभासमा उतारिरहेका गरिरहेका थिए ।
चन्द्रा श्रेष्ठले लेमन एल्लोले क्यानभासमा पोत्दै रङ्गलाई स्थीर बनाइ प्लाष्टिकबाट धुलो रङ्ग निकाल्दै उडाउँदै कतै सिन्दुर जात्रा नै पो हाकि भन्ने भाव दिने खालका चित्रमा काम गर्दै थिइन् । कार्यशालाका आयोजक तथा आर्ट क्लब नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन विक्रम राणाका अनुसार–‘नेपाली कला क्षेत्रमा वरिष्ठ कलाकार तथा युवा कलाकारहरुलाई एउटै मैदानमा राखेर कार्यशाला गर्नु नौलो भएको बताए ।’ यसरी कार्यक्रम गर्दा एक अर्को वीच विचारको आदानप्रदान हुने बताउँदै पुराना पुस्ताका कला नयाँ पुस्ताले र नयाँ पुस्ताका कला पुराना पुस्ताले हेर्दै र त्यसको महत्व बुझ्दै अगाडि बढ्न मदत गरोस् भन्ने हेतुले पनि कार्यशाला आयोजना गरिएको बताए । आर्ट क्लब नेपालले विभिन्न अवसरहरुमा यस्ता कार्यशाला गर्दै आइरहेको तथा आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले अगाडि थप्दै भने–‘नयाँ वर्ष २०७८ रङ्गहरुको वर्ष बन्न सकोस् ।
Previous गोदावरी साहित्य परिषदको स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम
Next नेपालका ढुङ्गाका मूर्तिहरु